निर्मलाको हत्यारा सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप – Gorkha Sansar
निर्मलाको हत्यारा सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप
तनहँु, माघ ६ गते । नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न असफल भएको बताउनु भएको छ । आइतबार नेपाली काँग्रेस तनहुँले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
देउवाले सरकारले निर्मला पन्त हत्यारालाई संरक्षण गरेकोले पत्ता लाग्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । ‘हत्याको प्रमाण नष्ट गर्ने खोज्ने , कपडा पखाल्ने जस्ता कार्य गरेको स्पष्ट हुँदा हुँदै पत्ता लगाउन नसक्नु भनेको सरकारले नै सरक्षण गरेकोले हो’ उहाँले भन्नु भयो । देशमा बलात्कार , हत्या , हिंसा तथा आतङ्क जस्ता आतङ्कित कार्यहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर असफल सावित भएको बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र समावेशी पाटी दाबी गर्दै देउवाले महिला , जनजाति , मधेसी , अल्पसङ्ख्यक सबैलाई समेटेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोले पाटी मजुबद भएर जाने बताउनु भयो ।
गोविन्दराज जोशीले आब्हान गरेको विशेष अधिवेशन स्थगित गर्न पनि सभापति देउवाले आग्रह गर्नु भयो । साथै देउवाले नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाको नाममा तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा सञ्चालित जिपी कोईराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र खारेजी नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु । खारेजी गरेमा आन्दोलन शुरु गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि सो अवसरमा देउवाले दिनु भयो ।
केन्द्रको खारेजी गर्न लागेको प्रति इंकित गर्दै नेपाली राजनीतिका महानायक गिरिजाप्रसाद कोईरालको नाम पनि सुन्न सरकार किन चाहिरहेको छैन बुभ्mन सकेको छैन ? देउवाले प्रतिप्रश्न गर्नु भयो । सो श्वास प्रश्वास केन्दलाई आपूm भारत भ्रमण गएको बेला अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन भारत सरकारले सहयोग गर्ने वचन दिई र सम्झौता भएको अवस्थामा सरकारले विघटन गर्न न्यायोचित नहुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमा महामन्त्री डा. शसांक कोईरालेले आन्तरिक झगडाले गर्दा निर्वाचनमा पाटी पराजित भएको उल्लेख गर्दै एक ढिक्का भएर अगाडि बढे पाटीलाई पराजित नहुने बताउनु भयो । कार्यक्रम नेपाली काँग्रेस तनहुँका कार्यवाहक सभापति जीतप्रकाश आलेको सभापतिको अध्यक्षतामा भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री रामशरण कांग्रेसले सामूहिक नेतृत्वबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। कांग्रेसीले पार्टीको विधि र विधान पूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउँदै पार्टीको संशोधित विधान अरु कसैको नभएको महराले दावी गरे। उनले बहुलवाद र संसदवादलाई कम्युष्टिहरुले समेत आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नतर्फ लागेको बताए। माओवादीले समाप्त पार्न खोजेको सरकारको बजेट र देशलाई नेपाली कांग्रेसले बचाएको दावी गर्दै कांग्रेस अझै पनि शक्तिशाली रहेको बताए।
नेपाली काँग्रेस तनहुँका कार्यवाहक सभापति जीतप्रकाश आलेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा गोपालमान श्रेष्ठ, केन्द्रिय सदस्यहरु शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेल र जीवन परियार, नेका तनहुँका सभापति वैकुण्ठ न्यौपाने लगायतले व्यक्तिगत द्वन्द्वलाई पार्टीसँग तुलना नगरी पार्टीको विधि र विधान अनुरुप कमी कमजोरी र असन्तुष्टी पक्षलाई पार्टीसँग छलफलको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरुले बाहिर विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्नु भन्दा विधान अनुसार प्रक्रिया पु¥याएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समेत आग्रह गर्नु भयो ।
आदिवासी जनजातीको सवै वार्डमा इकाइ गठन हुने ।
पालुङटार नगरपालिकाको सार्वजनिक सुुनुवाइ आज हुने ।
भोली पालुङ्टारमा ज्योति मगर आउँदै, अहिलेसम्म २५ हजार दर्शकले अवलाेकन गरे लिगलिग पालुङ्टार महाेत्सव
तनहुँ जलविद्युतको नयाँ टेण्डर हुने
ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रशिक्षण
महिला सङ्घ बन्दीपुरमा गिरी